Wararkii ugu danbeeyay dagaalka Al-Shabaab ku qaatay Abuu Mansuur Roobow – Warfaafiye:
Wararkii ugu danbeeyay dagaalka Al-Shabaab ku qaatay Abuu Mansuur Roobow
Ali Mohyadin Aug 9, 2017 0
Warar dheeri ah ayaa kasoo baxaya weerar xoogan oo saakay aroortii ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen Sheekh Mukhtaar Roobow Cali “Abuu Mansuur” oo ciidamo boqolaal ah ku haysta deegaanka Abal ee uu kasoo jeedo, waxaana la sheegayaa in dagaalka oo la isu adeegsanaayo hubka tiknikada ah iyo madaafiicda garbaha.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in Al-Shabaab ay deegaanka geeyeen ciidamo iyo tikniko aad u fara badan, kuwaasi oo jaray isgaarsiinta iyo wadooyinka si maliishiyada Abuu Mansuur aysan u helin gurmad, ama si uusan u baxsan, waxaana lagu soo waramayaa in Al-Shabaab ay qabsadeen mid ka mid ah gaadiidka Abuu Mansuur uu ku dagaalamayay.
Weerorkaan ayaa waxaa hoggaaminaayo saraakiil ku heyb ah Abuu Mansuur, waxaana ka mid ah Guddoomiyaha Al-Shabaab u qaabilsan Gobolada Bay iyo Bakool Macalin Geedow iyo Sheekh Xasan Yacquub oo ah Guddoomiyaha Shabaab ee Gobolka Galgaduud.
Dhincaa kale, Saraakiisha maamulka K/Galbeed ee Gobolka Bakool ayaa sheegay in Sheekh Mukhtaar Roobow uu dalab gurmad ah u soo dirtay maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana la diyaarinayo sidii ciidamo loogu diri lahaa.
Warar horudhac ah ayaa sheegaya in Abuu Mansuur uu si dirqi ah ugu baxsaday bilowgii weerarka oo ahaa mid gaadmo ah, ayna qabsadeen gaari ka mid ah kuwii ay ku dagaalamayeen maliishiyada Al-Shabaab.
Abuu Mansuur oo bishii June Mareykanka ka saaray liiska madaxda Shabaab ee lacagta la dul dhigay ayaa wada hadal la galay dowladda federaalka, walow si rasmi ah u caddeyn mowqifkiisa, waxaase jiray isu soo dhowaansho iyo xiriir wanaagsan oo dhex maray Abuu Mansuur iyo dowladda Somalia.